किन हामी डरलाग्दो सपना देख्छौं ? आखिर किन यस्तो हुन्छ ? डरलाग्दो कारण...... - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र २, बुधबार (१0 महिना अघि)
कहिले काहीँ राम्ररी निद्रा पर्दैन । यसलाई त्यती ठूलो समस्या मानिदैन । बेलाबखत निद्रा नपर्नु सामान्य हो । तर, पटक पटक यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने हाम्रो शारीरिक अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । किनभने निद्रा आफैमा औषधि समान हो । शरीरका लागि पोषणयुक्त खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हावा जस्तै निद्रा पनि अपरिहार्य मानिन्छ ।
जब हामी राम्ररी निद्रा लिन्छौं, गहिरो निद्रामा पुग्छौं, धेरै स्वस्थ अनुभव गर्छौं । गहिरो निद्रा लिइसकेपछि हाम्रो शरीर चंगा हुन्छ ।
तर, सधै यस्तो अवस्था नहुन सक्छ । खासगरी राती निदाइसकेपछि छटपटी हुने, डरलाग्दो सपना देख्ने र ब्युँझने गर्छौं । डरलाग्दो सपना देखेपछि हाम्रो मन यसै आत्तिन्छ । हामी भित्र भित्रै डराउँछौं । यसरी तनावग्रस्त भएपछि निद्रा विथोलिन्छ ।
आखिर किन यस्तो हुन्छ ? किन हामी डरलाग्दो सपना देख्छौं ?
तपाईं सुतिरहेको बेला जब डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ त्यसको कारण तनाव वा डिप्रेसन त होइन रु शंसय गर्ने ठाउँ रहन्छ । एक अध्ययनले भन्छ, ‘डरलाग्दो सपना देख्नुको पछाडि तपाईंमा डिप्रेसन हावी भइरहेको छ ।’ फिनल्यान्ड विश्वविद्यालय र फिनिश नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयरका शोधकर्ताले एकसाथ मिलेर २००७ र २०१२ मा गरेको दुई क्रस सेक्सनल सर्वेक्षणमा विश्लेषण गरिएको थियो । यस सर्वेक्षणमा भाग लिने व्यक्ति २५ बर्षदेखि ७४ बर्ष उमेर समूहका थिए ।
शोधकर्ताले पाए कि यस किसिमको डरलाग्दो सपना देख्नुको पछाडि अनिद्रा, थकान, डिप्रेसन र आफैमाथि नकारात्मक रवैया राख्नु हो । अतः उनीहरुको सुझाव थियो, ‘यदि चैनको निद्रा सुत्ने हो भने तनाव वा डिप्रेसनबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।’
रेडक्रस सोसाइटी रुकुम पश्चिमले जिल्ला अस्पताल सल्लेका विरामीहरुलाई फलफूल वितरण
काठमाडौंमा कक्षा ११ र १२ र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई भोलि (शुक्रबार) बाट खोप दिइने